Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa marihuana any Mississippi - lalàna Marijuana mpitsabo any Mississippi
Ahoana ny fomba ahazoana fahazoan-dàlana marijuana any Mississippi
Te hanana fahazoan-dàlana any Mississippi ianao?
FOMBA HAHAZOANA LISENENA BUSINESS MARIJUANA AO MISSISSIPPI
Miomàna hianatra ny fomba hahazoana ny fahazoan-dàlana hividianana marijuana any Mississippi! Ny olona ao MississippAfaka mangataka fahazoan-dàlana ho an'ny marijuana aho ary manomboka miasa tsy ho ela ao amin'ny fanjakana, taorian'ny nifidianan'ny Mississippi ny marijuana ara-pitsaboana tamin'ity fifidianana 2020 ity.
Nandalo i Mississippi Initiative 65 aorian'ny fankatoavana ny refy Ballot 1 mba hamelana ny marijuana ara-pahasalamana manodidina ny 68% amin'ny vato - 32% hanohitra. Taorian'ny fankatoavana ny fepetra fandatsaham-bato, ny latsa-bato dia nifidy Initiative 65 tamin'ny vato manodidina ny 74%.
Manolo-kevitra ny hanitsy ny lalàm-panorenan'ny Mississippi izy io mba hahafahan'ny marary mahay manana toe-pahasalamana marefo, araka ny fanamarinana nataon'ny mpitsabo nahazo alalana tany Mississippi, hampiasa marijuana ara-pitsaboana. Io fanitsiana io dia ahafahan'ny marijuana ara-pitsaboana tsy manome afa-tsy ny ivon-toeram-pitsaboana fahazoan-dàlana
FIVAVAHANA MISY: LALSNA MARIJUANA MEDIA MISSISSIPPI
FIVAVAHANA MISY: FOMBA HAHAZOANA LISENY MARIJUANA ANAO DAKOTA ATSIMO
Fandaharam-potoana ho an'ny programa marijuana mpitsabo any Mississippi
Ny Departemantan'ny Fahasalamam-bahoakam-panjakan'i Mississippi dia miasa amin'ny fitsipika arak'ireto manaraka ireto:
Daty kasaina Hetsika mifehy
Talata, Aprily 20 Manomboka ny vanim-potoana fanehoan-kevitra ho an'ny daholobe voalohany
Talata, Mey 11 Fitsarana am-bava
Asabotsy May 15 Tapitra ny fe-potoana fanehoan-kevitra voalohany ho an'ny daholobe
Zoma, Mey 21 Ny birao dia mijery ny hevitry ny besinimaro ary manome tolo-kevitra hanovana
Zoma, Mey 28 Birao handray ny fanovana
Alatsinainy Jona 1 Atsaharo ny fanovana mandritra ny vanim-potoana faharoa ho an'ny besinimaro
Talata 2 Jona - Alahady 27 Jona Fotoana fanehoan-kevitra faharoa ho an'ny daholobe
Talata, Jona 29 Famerenana farany ny birao
Alarobia, Jona 30 Fametrahana ny lalàna farany, manomboka ny 1 Jolay
Karazana fahazoan-dàlana marijuana hampiasaina any Mississippi:
Araka ny volavolan-dalàna naroso farany -amin'ny Mey, 2021- dia hisy karazana fahazoan-dàlana marijuana efatra:
Fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly
Fahazoan-dàlana ho an'ny mpanamboatra
Toeram-pitsapana marijuana tsy miankina
Ny mpangataka dia afaka mangataka karazana lisansa mihoatra ny iray indray mandeha. Ny mpangataka dia ho tompon'andraikitra amin'ny sarany mifandraika amin'ny karazana lisansa izay anaovana ny fangatahana.
Ireo ivon-toeram-pitsaboana marijuana ara-pahasalamana dia orinasa voasoratra anarana ary manana fahazoan-dàlana ary fehezin'ny departemanta ary mandrindra marijuana ara-pahasalamana, kojakoja mifandraika ary / na fitaovam-pianarana. Ny foibem-pitsaboana dia mety handray anjara amin'ny iray na mihoatra amin'ireo hetsika tafiditra amin'ny fikarakarana marijuana ara-pahasalamana.
Firy ny isan'ny fahazoan-dàlana marijuana avela any Mississippi?
Tsy nametraka fahazoan-dàlana voafetra manerana ny fanjakana manerana ny faritra i Mississippi ho an'ny tobim-pitsaboana marijuana ara-pahasalamana, mifanohitra amin'ny fanjakana maro hafa any Etazonia toa ahyllinois ary Arizona.
Vola ofisialy ho an'ireo mpiditra vaovao amin'ny tsena
Ny lalàna vaovao natolotra farany dia mametraka ireto sarany manaraka ireto ho an'ny orinasa rongony:
Saran'ny fangatahana lisansa mpamboly: $ 15,000.00
Saran'ny fangatahana fahazoan-dàlana amin'ny mpamokatra: $ 15,000.00
Saram-pandraisana fampiharana: $ 15,000.00
Saram-panaovana mari-pahaizana marijuana tsy miankina: $ 15,000.00
Ny fangatahana rehetra dia tsy maintsy miaraka amin'ny sarany fangatahana tsy averina. Ny fangatahana iray dia tsy ho raisina ho feno mandra-pahatongan'ny Departemanta ny sarany fangatahana. Ny fampiharana tsy feno dia ho foana aorian'ny 90 andro kalandrie hatramin'ny andro voalohany fandefasana.
Ankoatr'izay, aorian'ny fanomezana fahazoan-dàlana, ny mpangataka dia tsy maintsy mandoa ireto sarany manaraka ireto:
Saran'ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamboly: $ 10,000.00
Saran'ny fahazoan-dàlana ho an'ny mpamokatra: $ 10,000.00
Saran'ny fahazoan-dàlana hividianana lisansa: $ 10,000.00
Saran'ny fahazoan-dàlana hizaha marijuana tsy miankina: $ 10,000.00
Hetra any Mississippi ho an'i Marijuana
Ny departemanta dia mety manombana hatramin'ny mitovy amin'ny tahan'ny hetra amin'ny varotra amin'ny fivarotana marijuana ara-pitsaboana farany, saingy mbola tsy tafapetraka ny tahan'ny hetra.
Ity misy Initiative 65:
Afaka mandrara ny fandraharahana marihuana any Mississippi ve ny tanàna?
Ny ivon-toeram-pitsaboana marijuana dia tsy azo fehezina bebe kokoa noho ny orinasa ara-barotra na indostrialy ara-dalàna mitovy habe sy misy mpiasa.
Ahoana no ahafahako manomboka manomana ny fangatahana fahazoan-dàlana ho an'ny orinasa Marijuana
Tsy dia misy fampahalalana firy momba ny fizotran'ny fahazoan-dàlana. Ny ankamaroan'ny fampahalalana dia ho avy amin'ny volana manaraka. Na izany aza, araky ny lalàna naroso farany -amin'ny Mey 2021- mba ahafahana mangataka fahazoan-dàlana, amin'ny maha olona voajanahary azy, io olona io:
Tokony ho iraika amby roa-polo (21) taona no ho miakatra;
Tsy mbola nanana fahazoan-dàlana ho an'ny karazana orinasa manana fahazoan-dàlana
mandray anjara amin'ny programa marijuana ara-pitsaboana any Mississippi na hafa
fanjakana izay nofoanan'ny fahefana ara-dalàna momba ny fahazoan-dàlana ho an'ny fanjakana;
Tsy voaheloka noho ny fanamelohana heloka bevava taloha
dimy (5) taona manomboka ny andro fampiharana;
Raha manana fahazoan-dàlana matihanina, dia tsara toerana izany fahazoan-dàlana izany; SY
Tsy mila trosa amin'ny Fanjakan'i Mississippi na ny fizarazarana ara-politika.
Dimy amby roapolo (25) isan-jato farafahakeliny ny fananana mifehy no tazonina
avy amina mponina any Mississippi ankehitriny.
Ary raha ny mpangataka dia mangataka amin'ny anaran'ny orinasa iray, ankoatry ny fepetra voalaza etsy aloha, ny mpangataka:
Nahazo alalana ara-dalàna handefa fangatahana (araka ny voalazan'ny
Departemanta) amin'ny anaran'ny orinasa;
Izy no tokony ho lohalaharana amin'ny fifandraisana amin'ny Sampana;
Hanolotra porofo ampy fa:
Ny orinasa dia tsy manana tompona, mpikambana ao amin'ny birao, na tompon'andraikitra latsaky ny iray amby roapolo taona (21);
Ny orinasa dia tsy manana tompona, mpikambana ao amin'ny birao, tompon'andraikitra na agents izay efa tompony, mpikambana ao amin'ny birao, tompon'andraikitra, na mpiasan'ny antokon'olona manana fahazoan-dàlana amin'ny karazana marijuana ara-pitsaboana any Mississippi na fanjakana hafa nofoanana. avy amin'ny fahefan'ny fahazoan-dàlana avy amin'ny fanjakana;
Ny orinasa dia tsy manana tompona, mpikambana ao amin'ny birao, tompon'andraikitra na agents izay voaheloka ho nanala ny fanamelohana ho meloka tao anatin'izay dimy taona lasa izay nanomboka ny andro fampiharana;
Raha manana tompona, mpikambana ao amin'ny birao, manamboninahitra na mpandraharaha manana fahazoan-dàlana matihanina, dia tsara toerana izany fahazoan-dàlana izany; SY
Ny orinasa dia tsy manana tompona, mpikambana ao amin'ny birao, tompon'andraikitra, na agents izay manana trosa amin'ny State of Mississippi na ny fizarana politika misy azy.
Dimy amby roapolo (25) isan-jato farafahakeliny ny tompon'ny fifehezana ny entity no tazonin'ireo mponina ao Mississippi ankehitriny.
Amin'ny fotoana anaovana ny fangatahana dia tsy maintsy omena ireto antontan-taratasy manaraka ireto ho an'ny mpangataka tsirairay sy ny tompony rehetra, ny mpikambana ao amin'ny birao, ny tompon'andraikitra, na ny maso ivoho ho an'ireo mpangataka misolo tena orinasa:
Laharana fiarovana ara-tsosialy na isa fanondroana hetra;
Adiresy mailaka na adiresy fonenana lehibe raha tsy mitovy amin'ny mailaka
Adiresy mailaka; ary,
Fanambarana ny fahefan'ny tsirairay hiasa amin'ny anaran'ny orinasa iray, raha ilaina izany;
Fanekena ny fizahana ara-panjakana sy federaly; ary,
Karatra amin'ny dian-tànana na sary dian-tanana mivantana.
Vaovao bebe kokoa no ho hita ao anatin'ny volana ho avy, fa amin'izao fotoana izao dia afaka miomana ny tenanao amin'ny fanomanana ny drafi-piasana cannabis mety. Ao anatin'ny programa dia hazavainao hoe karazana dispensary inona no tianao hosokafana, mandra-pahoviana no kasainao hiasa ao Mississippi, ary inona ny hevi-dehibe ao amin'ny orinasanao.
Rehefa mangataka fahazoan-dàlana rongony any Mississippi na fanjakana hafa, ny ampahany manan-danja indrindra amin'ny fizotrany dia ny manaraka ny lalàna mifehy ny fangatahana fangatahana. Hendry foana ny manatona mpisolovava momba ny lalàna mifehy amin'ny fanjakana manokana.
Alson, tandremo ny fitsipiky ny kaomina, ny tanàna sasany dia hanana lalàna izay mety hahasoa kokoa na tena teritery kokoa amin'ny orinasanao. Aza hadino ny manampy anao rehefa mifidy ny toerana misy anao ianao
Raha tsy azonao antoka ny fomba fanatanterahana ny fangatahanao dia azonao atao ny mifandray amin'ny mpisolovava marina izay hanampy anao hamorona drafitra mety amin'ny fizotranao raha te hanokatra dispensary rongony any Mississippi ianao.
Hevitra lehibe momba Initiative Mississippi 65
Initiative 65 nolaniana tamin'ny 68% tamin'ny vato - 32% nanohitra. Taorian'ny fankatoavana ny fepetra fandatsaham-bato, ny vato dia naka Initiative 65 tamin'ny vato manodidina ny 74%.
Mitombo ny trano?
Expungement? tsy misy
Famaritana ara-tsosialy? NO
Ampahany amin'ny hetra natokana amin'ireo vondrom-piarahamonina misy fiatraikany? No
Voninkazo hatramin'ny 1 Oz na famonosana 8 grama
Atombohy ny fanekena ny fangatahana ho an'ny mpamatsy sy ny dispensary amin'ny 1 Janoary 2022.
Ivon-toerana fitsaboana Marijuana fitsaboana
Ireto misy fanavaozana vitsivitsy momba ny Legalization Cannabis Mississippi
Manameloka ny fampanoavana Marijuana any amin'ny fitsarana ambony ny tompon'andraikitra any Mississippi
Sampan-draharahan'ny fahasalamam-panjakana amin'ny 'dingana fandrindrana' amin'ny famolavolana programa marijuana ara-pahasalamana
Ny fampielezan-kevitra Trump dia nandidy ireo mpikatroka mafàna fo marijuana any Mississippi hitsahatra amin'ny fampiasana ny anaran'ny filoha